မ​င်္ဂ​လာ​ရှိေ​သာ​စ​ကားများ (၂) | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← မ​င်္ဂ​လာ​ရှိေ​သာ​စ​ကားများ (၁)
ဖြစ်ပျက်မြင်အောင်ကြည့် (၂) →
Posted on March 31, 2011 by chitnge
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမှန်တကယ် ကျင့်ကြံအားထုတ် အောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့တယ်လို့ ပြောဖူးသားပဲ။ တကယ်ကျင့်တဲ့ အခါကျ တကယ်အောင်မြင်သွားတာ၊ ဒီအခါမှာ တကယ်မကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အံသြရတာပေါ့၊ ဥပမာ — လောကုတ္တရာ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ရပြီး အရိယာ ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် အရိယာဉာဏ်ဟာ ရုပ်နာမ်မဟုတ်ဘူး။ ရုပ်နာမ်ကနေ သီးခြားလွတ်သွားတယ်၊ ဒါကို မကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ဘယ်လိုမှ နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျင့်တော့မှ နားလည်နိုင်မှာပါ။
တကယ်တော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားက ယုတ္တိနည်းကျတယ်။ ရုပ်နာမ်က မမြဲပါဘူး ဆိုပြီးတော့ မမြဲတဲ့ အထဲမှာပဲ အရိယာ ဖြစ်နေလို့ ရှိရင် – ဒါ ယုတ္တိနည်း ဘယ်ကျမှာလည်း .. .. မမြဲပါဘူး ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှ မမြဲတဲ့အထဲမှာပဲ လောကုတ္တရာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ – ဒါ ဘယ်ယုတ္တိနည်း ကျမှာလည်း။ လောကုတ္တရာဆိုတာ အပျက်ကနေ လွန်ရတာ၊ လောကကနေ လွန်ရတာ။ လောကဆိုတာ အပျက်ပဲ ဒီတော့ မမြဲတဲ့ ရုပ်နာမ်ကနေပြီးတော့ လွတ်ထွက်သွားတယ် ဆိုတာက လောကုတ္တရာဘက် ရောက်လို့ရှိရင် ဉာဏ်ပညာဆိုတာ ရုပ်နာမ် မဟုတ်တော့ဘူး။ အဲဒီဉာဏ်က သီးခြားပဲ – ဒီဉာဏ်က အရိယာ ဖြစ်လို့ရှိရင် သောတပန်ကနေစပြီး ရဟန္တာအထိက မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ရသွားရင် ဒီဉာဏ်တွေက နိဗ္ဗာန်ကို စံဝင် မျက်မှောက် ပြုပြီး နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘော သဘာဝကို သိသွားတာ – ဒီအခါမှာ ဒီလူ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီရုပ်နာမ် မဟုတ်ဘူး၊ ဒီရုပ်နာမ်ကို အခြေပြုပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားကို ယုံလို့ ကျင့်ကြံအားထုတ်လို့ ဖြစ်သွားတဲ့ အရိယာရဲ့ ဖိုလ်ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် “မဂ္ဂဖလာန မာလမ္ဗဏဘူတော အသင်္ခတ ဓမ္မော” လို့ ဒီလိုလာတာ .. . တနည်းအားဖြင့်လည်း “စတုမဂ္ဂ ဉာဏေန သစ္ဆိကာ တဗ္ဗံ” လို့ ဒီလိုလာတာ။ “စတုမဂ္ဂ စိတ်ဏေန” မှ မဟုတ်ဘဲ ” စတုမဂ္ဂ ဉာဏေန” ပဲ။
အဲဒီတော့ အရိယာဉာဏ် ဆိုတာက လူနဲ့မတူဘူး။ ရုပ်နာမ်ကနေ သီးခြားဖြစ်ထွန်းပြီးတော့ လောကုတ္တရာဘက်ကို ရောက်သွားတာ။ ဒါပေမယ့် မကျင့်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒေသနာ ဂမ္ဘီရကို မရကြဘူး ပြောတာ။ ဥပမာ — အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တလည်းရတယ်၊ ဒုက္ခ အနိစ္စ အနတ္တလည်းရတယ်၊ အနတ္တ ဒုက္ခ အနိစ္စလည်းရတယ်၊ ဒါက လက္ခဏာရေးသုံးပါးက ဒီလိုပဲ အမျိုးမျိုးရတယ်၊ ဒါပေမယ့် မကျင့်ရင်တော့ နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ လိုက်လည်း လိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒေသနာဂမ္ဘီရတောင် မရတဲ့အခါကျတော့ ပဋိဝေဒဂမ္ဘီရဆိုတာ ပိုတောင်ဝေးတာပေါ့။
ဒါကြောင့် မိမိကတော့ တကယ့် ဆရာကောင်း သမားကောင်းနဲ့ ရဟန္တာ ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေရဲ့ အဆိုအဆုံးအမကို ခံရတော့ မိမိကသိတယ်။ (အခါအားလျော်စွာ ပြောပြပါမယ်) စေတနာ မေတ္တာ အပြည့်နဲ့ ပြောပြမယ်။ ခက်လို့သာ ဖြည်းဖြည်းခြင်း ပြောနေရတာပါ ဗုဒ္ဒဘာသာမှာ အမှန်အကန် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီခေတ်က သိပ္ပံခေတ်ဆိုတာ ကိုယ်လိုက်ရာ ကိုယ်တော်တာပဲ – မလိုက်ဘဲနဲ့ သူများတော်တာကို မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ ကုန်းအော်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ဟာသလို ဖြစ်နေတာပေါ့ ရယ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ရှိပါစေတော့ သစ္စာဝါဒီများ အခါကြီး ရက်ကြီးမှာ တရား ကြိုးစားကြပါစို့ .. .. .
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, Nibbana, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, လောကုတ္တရာ
This entry was posted in Buddhism, Frontpage and tagged Buddhism, Myanmar Posts, Nibbana, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, လောကုတ္တရာ. Bookmark the permalink.